yKey म्याकका लागि - # १ दोहोरिने कार्यहरूको स्वचालनका लागि अनुप्रयोग बेर आश्चर्यजनक
yKey म्याकका लागि - # १ पुनरावृत्ति कार्यहरूको स्वचालनको लागि अनुप्रयोग
नवीनतम: 12 / 28 / 21
आवाश्यक हुन्छ: म्याक १०.10.9-१०.१11.4
yKey म्याक अनुप्रयोग - म्याक ओएसमा दोहोर्याइएको कार्यहरूको स्वचालनको लागि। समय बचत गर्न स्वचालित।
दिमाग रहित काम हटाउनुहोस्! म्याकमा दोहोर्याउने कार्यहरू स्वचालित गर्नुहोस्। कार्यहरूको कुनै अनुक्रम (क्लिक, ट्याप, प्रकार, ड्र्याग, खुला, बन्द, एप्स्क्रिप्टहरू, आदि) सर्टकटमा राख्न सकिन्छ जुन हटकी, मेनू, टाइमर, घटना वा USB मार्फत सुरू गर्न सकिन्छ। समय, टाइपि Save र सयौं क्लिकहरू बचत गर्नुहोस्। कार्पल टनेलबाट बच्नुहोस्। कम गर्नुहोस् र अधिक उपलब्धि गर्नुहोस्। म्यानुअल द्वारा एडम इन्जेस्ट
तपाईको बललाई दोहोर्याउने ड्रड्जरीको बल र चेनबाट स्वतन्त्र गर्नुहोस्। स्मार्ट चलाउनुहोस्, मेहनत गर्ने काम र क्रोधजनक काम हटाउनुहोस्, अब दास नहुनुहोस्।
"म्याकको लागि मेरो मनपर्ने स्वचालित सफ्टवेयर वाईकेई हो।" - डेभिड पोगे द्वारा समीक्षा, न्यू योर्क टाइम्स
yKey म्याकका लागि - # १ अनुप्रयोग दोहोरिने कार्यहरूको मात्राको स्वचालनको लागि
समीक्षा र रेभ्स
कम पूरा गर्नुहोस् अधिक गर्नुहोस्
एडम सी। एनजेस्ट "टेक कन्ट्रोल अफ वाईके" म्यानुअलका लेखक हुन्। उहाँको मैन्युअलले तपाईंलाई yKey स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ र यस आवश्यक म्याक स्वचालित सफ्टवेयरको लागि चरण-द्वारा प्रयोग ट्यूटोरियल प्रदान गर्दछ।
एडमले टिडबिट्स न्यूजलेटर सुरू गर्‍यो र बेच्ने बिक्रि हुने इन्टरनेट स्टार्टर किट श्रृंखला, र धेरै म्यागजिन लेख सहित धेरै प्राविधिक पुस्तकहरू लेखेको छ।
मार्च २०१ T ट्यूटोरियल "Ableton Live yKey साथ प्रयोग गरेर"
फ्रान्स कटनको गहिराइ ट्यूटोरियलले देखाउँदछ कि yKey किन आवश्यक छ Ableton Live9प्रयोग गर्नको लागि। यो आवश्यक छ यदि तपाईंले काम गर्नुभयो र अडियोको साथ धेरै समय खर्च गर्नुभयो भने। YKey को लागी छुट समावेश गर्दछ। अधिक Ableton प्रत्यक्ष र yKey प्रविधिहरू यहाँ.
बेन वाल्डी द्वारा ट्यूटोरियल, पीच पिट प्रेस
बेन वाल्डीको ट्यूटोरियल yKey लाई स्वचालन / म्याक्रो सफ्टवेयरको रूपमा एक ठूलो परिचय हो।
डेभिड पोगे, न्यू योर्क टाइम्स द्वारा समीक्षा
डेभिड पोगेले ऑटोमेसन / म्याक्रो सफ्टवेयरको बारेमा छलफल गर्दछ र उसको साप्ताहिक भिडियोमा उनी भन्छन् कि yKey उसको मनपर्ने छ।
म्याक- Guild.org द्वारा समीक्षा yKey out. out बाहिर चूहों दिन्छ
“मैले yKey प्रयोग गर्न सुरू गरिसकेदेखि यस मणिले मलाई हप्ताको एक घण्टा सर्टकटको प्रयोग गरेर बचत गर्यो। समग्रमा, मैले yKey लाई भरपर्दो र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो भएको पाए। म्याक ओएस एक्समा सर्टकटहरू सिर्जना गर्न सस्तो समाधानको लागि खोज्नेहरूका लागि, म yYey लाई एक नजर लिन सिफारिस गर्दछु। " - जेम्स रिचल्स्की
सँग काम गर्दछ कुञ्जी जसले तपाईंको सबै हटकीहरूमा द्रुत पहुँच दिन्छ।
के तपाईं आफ्नो कम्प्युटरको दास हुनुहुन्छ?
हामी हाम्रा कम्प्युटरहरूलाई माया गर्छौं, तर हामी सबै दोहोरिने कार्यहरूको थकानबाट परिचित छौं। हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरहरू प्रतिष्ठाको साथ व्यवहार गर्न धेरै सक्षम छन्, तर तिनीहरूलाई स easy्कलन गर्न र प्रदर्शन गर्नको लागि कम्प्युटरमा प्रदान गर्न अहिलेसम्म कुनै सजिलो तरीका छैन। अब, म्याकमा भाग्यमानी त्यहाँ yKey छ। तपाईको बललाई दोहोर्याउने ड्रड्जरीको बल र चेनबाट स्वतन्त्र गर्नुहोस्। तपाईको कम्प्युटरको नियम बनाउनुहोस्, अब दास नहुनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् yKey म्याकको लागि स्वचालन.
YKey तपाइँको समय बचत गर्न सक्दछ कसरी को एक सरल उदाहरण!
भन्नुहोस् तपाइँ सफारी प्रत्येक दिन खोल्नुहुन्छ र उही websites वेबसाइटहरूमा जानुहोस् र त्यसपछि केहि प्रतिलिपि गर्नुहोस् जुन तपाइँ कसैलाई ईमेल गर्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन समान कार्य सम्पादन गर्नुको सट्टा १ min मिनेट टाइप गर्न र क्लिक गर्न र खोल्ने र बन्द गर्ने अनुप्रयोगहरूको साथ यो एकKKY सँग एक हटकी वा मेनू आईटम मार्फत गर्नुहोस् र पृष्ठभूमिमा काम गर्न दिनुहोस् जब तपाईं केही अन्य काम गर्नुहुन्छ वा चियाको कप गर्नुहुन्छ। गम्भीरतापूर्वक, किन तपाईंको जीवन बलिदानको लागि नीरस दोहोर्याउने कार्यहरू गर्नुहोस् जब तपाईंको कम्प्युटरले तपाईंको लागि तिनीहरूलाई गर्न सक्दछ।
कम गर्नुहोस् र yKey को साथ अधिक पूरा गर्नुहोस्।
yKey म्याक OS X मा एक आवश्यक तर हराइरहेको तत्व थप गर्दछ, स्वचालन! yKey तपाइँ र तपाइँको कम्पनी को मूल्यवान समय र उर्जा बचाउनेछ। यो सबै दक्षता को बारे मा, हामी यो "कम गरिरहेको र अधिक उपलब्धि" भन्ने गर्छौं। yKey ले केही दोहोर्याउने कार्य परिवर्तन गर्न सक्दछ जुन हजारौं माउस क्लिकहरू समावेश गर्न सक्दछ (विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा, मेनूहरू र विभिन्न संवाद बाकसहरूमा) र टाइप गर्ने पृष्ठहरूलाई एक yKey सर्टकटमा जुन कुनै पनि समय सुरू गर्न सकिन्छ साधारण कुञ्जी प्रेसको साथ सहि समान कार्य गर्न। । हाम्रो अवलोकन खण्डमा सर्टकटको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
अवलोकन र स्वचालन
yKey एक स्वचालन उपयोगिता हो, एक प्रोग्राम जसले दोहोर्याउने कार्यहरू पूरा गर्नका लागि सर्टकटहरू सिर्जना गर्दछ। संक्षेप मा, एक yKey शर्टकट यसको आफ्नै अधिकार मा एक सानो कार्यक्रम हो, तर तपाईं एक yKey शर्टकट सिर्जना गर्न प्रोग्रामिंगको बारेमा पहिलो चीज थाहा छैन। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको सर्टकटको तीन आवश्यक भागहरू सँगै राख्नु पर्छ: एक वा बढी आदेशहरूले सर्टकटलाई यसको कार्यक्षमता, एउटा प्रस context्गमा चल्दछ जुन सर्टकट दिन्छ, र एक सुरुवातकर्ता जसले सर्टकट कसरी सक्रिय हुन्छ परिभाषित गर्दछ।
एक सर्टकट parts भाग बाट बनेको छ:
कमाण्ड भनेको कार्य, वा कार्यहरूको श्रृंखला हो, कि तपाई yKey प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ। कमान्डको उदाहरण हो: फोटोशप खोल्नुहोस् र नयाँ कागजात सुरू गर्नुहोस्। yKey मेनू खोल्न र मेनू आईटमहरू छनौट गर्न सक्दछ। यसले प्यालेटबाट एप्पल स्क्रिप्टहरू समात्छ र चलाउन सक्छ। अनुप्रयोगमा स्क्रिनको क्षेत्रहरू ट्याप गर्न माउसको चाल स्वत: चालु गर्नुहोस्। यसले काम गर्न सक्दछ
संदर्भ जहाँबाट तपाइँको सर्टकट सक्रिय गर्न सकिन्छ। प्राय जसो प्रस univers्ग सार्वभौमिकमा सेट गरिएको छ ताकि यसले तपाईको कुन अनुप्रयोगमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको वास्ता नगरी काम गर्दछ। यद्यपि तपाईले केवल फोटोशपमा प्रयोगका लागि हटकी सेट गर्न चाहानुहुन्छ, यस अवस्थामा परिप्रेक्ष्य फोटोशपमा सेट हुनेछ। yKey सबै अनुप्रयोगहरूमा र बीच काम गर्दछ।
एक सुरुवातकर्ता त्यो हो जुन तपाइँको सर्टकटलाई सक्रिय गर्दछ। प्राय जसो यो हटकी वा मिति समय घटना हो। उदाहरण को लागी सफारी लन्च विकल्प + s थिच्नुहोस् वा यो तपाईको लागि हरेक बिहान :8:०० बजे लोड गर्नुहोस्।
अनुप्रयोग र कागजातहरू
YKey प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको कम्प्युटरलाई सफ्टवेयर अनुप्रयोग सुरू गर्न, स्विच गर्न, देखाउन, बन्द गर्न र पुनः सुरू गर्न, वा तिनीहरूका कागजातहरू सिर्जनाकर्ता अनुप्रयोग भन्दा अन्य अनुप्रयोगहरूमा निर्दिष्ट कागजातहरू खोल्न भन्न। भर्खरको अनुप्रयोगहरू र हाल चालु अनुप्रयोगहरूमा पहुँच समावेश गर्दछ। yKey वास्तविक अनुप्रयोग र चलिरहेका अनुप्रयोगहरूको मेनूहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम छ।
'विकल्प' + 'g' ले मलाई नयाँ विन्डोमा गुगलमा लैजान्छ। 'विकल्प' + 's' सफारी लोड गर्दछ वा सबैभन्दा भर्खरको विन्डो अगाडि ल्याउँदछ। 'विकल्प' + 'p' ले फोटोशप खुल्छ (वा कुनै अनुप्रयोग तपाईंले छनौट गर्नुभयो) र नयाँ कागजात खोल्दछ। अनुप्रयोगहरू बीच स्विच कहिल्यै यति सजिलो र छिटो भएको छैन।
मेरो कार्य सूची कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। दिनको सुरूमा यो अनुक्रमको एक भागको रूपमा लोड हुन्छ, साथै मेरो ईमेल, cnn.com, र eBay आईटमहरू जुन मैले ट्र्याक गरिरहेको छु। दिनमा मेरो सूची जाँच गर्न, म मात्र 'विकल्प' थिच्नुहोस् + 'shift' + 't' र यो मेरो डेस्कटपको अगाडि आउँदछ।
स्वरूपण कागजात कठिन हुन सक्छ। तपाईंसँग धेरै फन्टहरू, आकारहरू, र colorsहरू, र प al्क्तिबद्ध कन्फिगरेसनहरू हुन सक्छन्। मैले yKey को हटकीहरू सेट गर्न प्रयोग गरें, जुन केवल एमएस वर्ड भित्र काम गर्दछ, जसले मेरो ढाँचा स्ट्रिम गर्दछ।
क्लिपबोर्ड, विन्डो, प्रणाली, र UNIX
क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्ने, टाँस्ने र थप गर्ने सबै yYey मार्फत सम्भव छ। yKey प्रणाली प्राथमिकताहरू खोल्न र कुनै पनि प्राथमिकता फलकहरुमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। yKey कम्प्युटर बताउन सक्दछ जब सुत्ने, पुन: सुरु गर्ने वा बन्द गर्ने बेला। म्याक ओएस एक्सको शक्ति प्रयोग गरेर, yKey ले UNIX आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दछ।
मँ निदाएको बेला मेरो हार्ड ड्राइभको ब्याक अप गर्न म yKey प्रयोग गर्दछु। तर जब यो सकियो, म मेरो कम्प्युटर सुत्न चाहन्छु ताकि म ऊर्जा बचाउन सकूँ। yKey ले यी सबैको हेरचाह गर्न सक्दछ, कस्तो क्रान्तिकारी सफ्टवेयरको टुक्रा!
मेरो वेबसाइटहरू विभिन्न कम्प्युटर सेटअपहरू र स्क्रीनहरूमा कसरी हेर्छन् भनेर हेर्नको लागि ठूलो छ। प्रत्येक चोटि मैले यो गर्दा प्रणाली प्राथमिकताहरू समायोजन थकाऊ हुन्छ। अब म यसलाई एकल क्लिकको साथ अगाडि र पछाडि स्विच गर्न स्वचालित गर्न सक्छु।
कीबोर्ड, माउस, मेनू, र प्यालेट
yKey दुबै किडाउन घटनाहरू र माउस घटनाहरू नक्कल गर्न सक्दछ, मतलब yKey कम्प्युटरलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ जस्तो कि कसैले शारीरिक रूपले कुञ्जीपाटी र माउस प्रयोग गरिरहेको थियो। कुञ्जीपाटी आदेशहरूले मिति टाइप गर्ने क्षमता, क्लिपबोर्डका सामग्रीहरू टाइप गर्न वा फाइलको सामग्रीहरू पनि सामिल गर्दछ।
फ्ल्यास MX मा कुनै तहमा फ्रेम घुसाउनको लागि कुनै हटकी छैन। प्रत्येक पटक माउस प्रयोग गर्नका लागि यसको विरोध गरे झैं, मैले yKey प्रयोग गरें ताकि यसले मेनुबाट 'सम्मिलित फ्रेम' चयन गर्दछ जब म 'विकल्प' + 'shift' + 'f' थिच्दछु। मैले प्रस set्ग सेट गरें कि यसले फ्ल्यासको भित्र मात्र काम गर्दछ, ताकि यो कुञ्जी अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि उपलब्ध छ।
मेरो सर्भरमा फाईलहरू अपलोड गर्न कठिन लाग्न सक्छ, विशेष गरी जब म PHP प्रयोग गर्दैछु, जुन मलाई बारम्बार सम्पादन, अपलोड, र परीक्षणको आवश्यकता पर्दछ। सुरक्षित एफटीपी सफ्टवेयर जुन मैले प्रयोग गरें मेरो अपलोडरबाट फाइलहरू तान्न आवश्यक पर्दछ। मैले yKey मा एक सर्टकट सेट गरेको छु ता कि जब म 'ctrl' + 'shift' + 'u' हिट गर्दछु, मेरो कम्प्युटरले फाइन्डर र मेरो ftp क्लाइन्ट खोल्छ, र मिति अनुसार फाइलहरू मिलाउन आवश्यक माउस चालहरूको नक्कल गर्दछ र त्यसपछि तान्नुहोस्। मेरो ftp ग्राहकलाई फाईलहरू अपलोड गर्नका लागि।
yKey तल सबै USB हार्डवेयर सूचीबद्धको साथ काम गर्दछ
i कुञ्जी कीबोर्ड
i Opti नेट
स्वान ओप्टि ग्लो
अल्ट्रा पर्ची किबोर्ड
इन्टर्नेट, लिपि, र ध्वनी
yKey ले वेब ठेगानाहरू खोल्न, नयाँ ई-मेलहरू सिर्जना गर्न, रोक्नुहोस्, फोल्डर पदानुक्रम प्रदर्शन गर्ने र फाइन्डर भित्र फाईलहरू देखाउन, ध्वनिहरू खेल्न, र एप्प्लसक्रिप्टहरू कार्यान्वयन गर्न वा आफैंमा चलाउन पनि सक्षम छ। प्यालेटहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको मोनिटरमा बटनहरूको साथ कहिँ पनि हुन सक्छ जुन तपाईंलाई बटन प्रेसको साथ एप्पल स्क्रिप्ट चलाउन अनुमति दिन्छ।
प्रतिस्पर्धीहरू, उद्योग समाचारहरू, र हाम्रो खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण हाम्रो कम्पनीको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागि म गुगल अलर्टहरू प्रयोग गर्दछु, आफैंमा एक अचम्मको उपकरण। तर के कुरा अझ अचम्मको कुरा यो हो कि मैले yKey लाई स्वचालित रूपमा हाम्रा सबै साझेदारहरूलाई प्रत्येक प्रासंगिक गुगल सचेत ईमेल गर्न को लागी अनुकूलित गरेको छु। के म एक दिन एक घण्टा खर्च गर्न प्रयोग गर्‍यो, अब सबै आफैंबाट भयो।
हातमा कार्यमा निर्भर गर्दै विभिन्न आवाजका साथ मलाई सचेत गराउन मैले yKey प्रयोग गरेको छु। यदि मेरो क्यालेन्डरमा बाह्रमा iChat सम्मेलन छ, भने yKey ले तुरही बजाउँछ, iChat खोल्छ, र मलाई मेरो मालिकहरूमा जोड्दछ।
Mac-Guild.org yKey out. out चूहों मध्ये gives. gives दिन्छ
“मैले yKey प्रयोग गर्न सुरू गरिसकेदेखि यस मणिले मलाई हप्ताको एक घण्टा सर्टकटको प्रयोग गरेर बचत गर्यो। समग्रमा, मैले yKey लाई भरपर्दो र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो भएको पाए। म्याक ओएस एक्समा सर्टकटहरू सिर्जना गर्न सस्तो समाधान खोज्नेहरूको लागि, म yYey लाई एक चोटि हेराई सिफारिस गर्दछु। "
- जेम्स रिचल्स्की सम्पूर्ण समीक्षा पढ्नुहोस्
माइकल हयात - अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व //7/११ ले उत्पादकता बढाउनको लागि yKey को प्रयोगको वर्णन गर्दछ।
हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूले के भन्नु पर्छ
"तपाईंको सफ्टवेयर बिना मेरा अन्तहीन प्रश्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि पूर्ण नीरस हुनेछ - मलाई दोहोर्याउने कार्यहरू मुक्त गर्नु भएकोमा धन्यवाद"
ब्रन्ट होलवेग, Kilts मा पुरुष
"सर्वप्रथम, म यो अवसर लिन चाहन्छु कि IMHO तपाईंको उत्पाद yKey ओएस एक्स को लागी सबैभन्दा राम्रो उत्पादकत्व उपलब्ध छ जुन मैले आजसम्म आइपुगेको छु। यो ईन्टरफेस र सुविधाहरूमा पहुँच यति सरल र राम्रोसँग कार्यान्वयन भएका छन् जुन बर्ष वा यसैले म प्रयोग गरिरहेको छु मैले चाहेको कार्य पूरा गर्न मद्दत गर्न फाइलहरू खोल्ने आवश्यकता नै आएको थियो। ट्युटोरियल र सिंहावलोकन हालसालै प्रस्तुत गरिएको राम्रो हिसाबले समयको लागि चलाउनका लागि र yKey को सम्भावना र क्षमताहरूको उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा सेवा गर्न। प्रणाली प्रशासक र फाईलमेकर डेभलपरको रूपमा म मेरो कामको हरेक भागमा yKey प्रयोग गर्दछ, विन्डोजलाई सार्ने र साइजिंग सर्टकटबाट मेनूमा र दोहोरिएको पाठ प्रविष्ट गर्न र कुञ्जीपाटीबाट एप्लिकेसनहरू चलाउन। मसँग हालै मेरो युनिभर्सल सेटमा keyboard० भन्दा बढी कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू छन् र आधा दर्जन अनुप्रयोग विशेष सेटहरू बीचमा अर्को or० वा थप थप फराकिलो छ। यी संयुक्तले मलाई सयौं कुञ्जी स्ट्रोकहरू र माउस क्लिकहरूमा एक घण्टा बचत गर्दछ। LaunchBar सँगसँगै, yKey दुई बिल्कुलै हुनु पर्छ उपयोगी सुविधाहरू मध्ये एक हो जुन म दिनको एक घण्टा धेरै चोटि प्रयोग गर्दछु। "
"यो पुरानो Youpi कुञ्जी हो, * धेरै * नयाँ सुविधाहरूको साथ। धेरै धेरै राम्रो! यसले अब क्विकीकीलाई सजिलैसँग प्रतिस्पर्धी गर्दछ। "
शर्मन विल्कोक्स, भाषाविज्ञान विभाग, न्यू मेक्सिको विश्वविद्यालय
"हामी बोस्टन चिल्ड्रेन्स म्युजियममा एउटा संग्रहालय प्रदर्शनमा yKey प्रयोग गर्दैछौं; यो एक ठूलो मंडप हो जुन बोस्टनको सिम्फनी हलसँग मिल्दोजुल्दो छ यसमा बोस्टन पपहरूको भिडियो स्क्रिनको साथ। अर्केस्ट्राको "आचरण" गर्न बच्चाहरूले इलेक्ट्रोनिक ब्याटन प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो संग्रहालय जानेहरूसँग हिट भएको देखिन्छ, जुन हामीलाई ठूलो खुशी लाग्छ। तपाईं यसको बारेमा अधिक विस्तारमा पढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं youretheconductor.com मा ख्याल गर्नुभयो भने। ”
टेरेसा मरिन नाकरा, कलात्मक निर्देशक, विसर्जन संगीत
"यो एक शानदार कार्यक्रम हो! यसले मलाई घण्टा र कामको घण्टा बचत गरिरहेको छ। म यसका लागि नयाँ चीजहरू सोच्दैछु। ”
जेम्स टोर्क, कम्पोजर र ध्वनि डिजाइनर
"चलिरहेको समर्थन र YKey को नयाँ रिलीजको लागि धन्यवाद जुन राम्रो र राम्रो हुँदै गइरहेको छ - म क्विचिस धेरै बर्ष पहिले प्रयोग गर्थें र yKey मा स्विच गर्ने मेरो निर्णयबाट खुसी छु - यसले मलाई लागतको एक अंशमा चाहिने सबै कुरा प्रदान गर्दछ। - राम्रो काम गरीरह्नु!"
“मैले म्याकमा वर्षौंसम्म किक्वेसेन्सर प्रयोग गरें। जब मैले ओएस एक्समा स्विच गरेँ, त्यहाँ कुनै ओएस एक्स संस्करण थिएन, त्यसैले मैले Youpi कुञ्जी प्रयोग गरे (जुन अहिले yKey हो)। यो एक ठूलो प्रतिस्थापन हो। यसले मेरो समयको घण्टा बचत गर्दछ। अत्यधिक सिफारिश! "
"YKey Rocks !!!! राम्रो काम!!!!"
विलियम जैमीसन, वेब प्रोजेक्ट्स मैनेजर, स्मार्ट वर्क्स, अष्ट्रेलिया
"म yaey बीटा अब एक हप्ता को लागी परीक्षण गरीरहेको छु। मैले याद गरे कि यो आज VersionTracker मा पोष्ट गरिएको थियो र तपाईंले यो याद गर्नुभएन कि यो “पहिले Youpi Key” होईन। यो महत्त्वपूर्ण छ कि सबैलाई थाहा छ कि Youpi कुञ्जी अब yKey छ किनकि तपाईंसँग धेरै Youpi कुञ्जी प्रशंसकहरू छन्! "
पॉल वार्फ, वेब टेक्नोलोजी विशेषज्ञ, माउन्ट होलोोक कलेज
"धेरै बर्ष पछि, म क्विककीजलाई सरल कामको लागि छोड्दैछु।"
"कस्तो राम्रो कार्यक्रम। म बोल्दा मेरो वालेटमा पुग्न लागेको छ। ”
"यो धेरै उपयोगी अनुप्रयोगको लागि धन्यवाद, जसले वास्तवमै उत्पादकता बढाउँछ।"
एरिक ले Carpentier
"नमस्ते साथीहरू, Youpi कुञ्जी (yKey) को नयाँ संस्करणमा राम्रो भयो। यो महान छ कि अब यो प्राथमिकता फलक हो। यो एक राम्रो थप हो। "
"कडा मेहनत को लागी धन्यवाद यो एक महान अनुप्रयोग बनाउन को लागी।"
"YoupiKey / yKey अपडेट गर्नु भएकोमा धन्यवाद। यो चाँडै नै मेरो प्रायः प्रयोग हुने सुविधाहरू मध्ये एक बन्न गइरहेको छ। फ्रन्ट एप्लिकेसन लुकाउनु भएकोमा धन्यवाद! अब म अन्तमा उही कुञ्जी स्ट्रोकको साथ कुनै पनि अनुप्रयोग लुकाउन सक्छु क्लासिकमा पनि। ”
त्यहाँ yKey को १०T वटा समीक्षा छन् VersionTracker.com मा
Stars. stars तारा र ,,, .०० डाउनलोड
- निरन्तर सुधार र म्यानुअलको लागि लिङ्कहरू अद्यावधिक गर्दै। तिनीहरूलाई https र Google कागजात म्यानुअलको लागि नयाँ लिङ्कहरू बनाउँदै। विविध अन्य वस्तुहरू अद्यावधिक गरियो।
- म्यानुअलका लागि सबै लिङ्कहरू अपडेट गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई https र Google कागजात म्यानुअलको लागि नयाँ लिङ्कहरू बनाउँदै।
- इंटेल को लागी M1 म्याक मा संकलित। रोसेट्टा को उपयोग गरी Intel र M1 Macs संग Macs मा चलाउँछ जसको मतलब यो M1 macs मा छिटो चल्छ। भविष्यमा युनिभर्सल आउनेछ
- 'बगफिक्स / डार्कमोडकन्ट्रास्टफिक्सहरू' थपियो
- प्राथमिकता स्क्रिनमा कालो मोडमा फिक्का उपकरण पट्टी फिक्स गर्नुहोस्
एप्पलस्क्रिप्ट पाठ एन्ट्रीमा फिक्का पृष्ठभूमि जबरजस्ती गरेर डार्क मोड कन्ट्रास्ट फिक्स गर्नुहोस् एप्पलस्क्रिप्ट स्रोत प्रणाली द्वारा एक श्रेयबद्ध स्ट्रिंग शैली हो, र एप्पलको आफ्नै स्क्रिप्ट सम्पादक अनुप्रयोग डार्क मोडमा खोल्दा प्रकाश पृष्ठभूमिमा सम्पादन दृश्य देखाउँदछ।
क्लिपबोर्ड, कमाण्ड र URL सर्टकट सम्पादकहरूमा गाढा पृष्ठभूमिमा गाढा मोड कालो पाठ फिक्स गर्नुहोस्
- तालिका दृश्यबाट तेर्सो ग्रिड लाइनहरू हटाउनुहोस् यी साँच्चिकै गाढा मोडमा अव्यवस्थित देखिन्छन्, र प्रकाश मोडमा पनि तिनीहरू पछाडिको प row्क्ति र superहरूसँग अनावश्यक हुन्छन्।
- स्टार्टअपको समयमा सम्भावित क्र्यास ठीक गर्नुहोस् यदि HID अनुमतिहरू अझै प्रदान गरिएको छैन
- उत्तम डार्क मोड कन्ट्रास्टको लागि प्रयोगात्मक मुख्य विन्डो उपकरणपट्टी आईकनहरू पुरानो छवि संसाधनहरू बदल्नुहोस् एपकिट प्रणाली आईकनको साथ धेरै भागको लागि। अपवाद "नक्कल" हो जसमा प्रणाली आईकन छैन।
- पाराम सम्पादकहरूमा गाढा खैरो पृष्ठभूमिमा गाढा मोड कालो पाठ फिक्स गर्नुहोस्
- सर्टकट सम्पादकमा सेतो पृष्ठभूमिमा गाढा मोड सेतो पाठ फिक्स गर्नुहोस् पुनरावृत्ति विवरण प्रणाली र colorको सट्टा अनुकूलन र using प्रयोग गर्दै थियो।
- किबोर्ड सर्टकट सम्पादकमा गाढा पृष्ठभूमिमा गाढा मोड कालो पाठ फिक्स गर्नुहोस्
- गिटलाई स्थानीय रूपमा उत्पन्न, प्रयोगकर्ता-विशेष फाईलहरू ट्र्याक गर्न चाहन रोक्नुहोस्
- स्थिर स्पार्कल अपडेटर हटाउनुहोस् स्पार्कल अपडेट चेकफोरअपडेट्स: केवल प्रयोगकर्ताले अनुरोध गरेको स्पष्ट अपडेटको लागि प्रयोग गरिने हो, सामान्य प्रोग्रामेटिक अपडेटको रूपमा होइन। यसको मतलब 'अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्' अब स्टार्टअपमा देखा पर्दैन र सबैलाई दिक्क लाग्छ।
* yKey अब अनुप्रयोग फोल्डरमा आफै सार्नको लागि प्रस्ताव गर्दछ जब पहिलो स्थापना हुन्छ।
* प्रारम्भिक सुरुवात अब म्याकोस अनुमतिहरू प्रदान गर्न सुधार गरिएको छ।
* सुधारिएको दृश्य देखाईएको छ जब पहिलो चलिरहेको yKey।
* लगइन गर्दा पुन: सुरुवातमा बगहरू फिक्स गर्दछ।
* सुविधा अनुरोध: yKey सम्पादक अब स्वचालित रूपमा yKey इन्जिन शुरू गर्दछ यदि यो इन्जिन पहिल्यै चलिरहेको छैन भने।
* भर्खरको म्याकोस संस्करणहरूको लागि अनुमतिहरूको अनुरोधित सूची अपडेट गरियो।
* यूआरएल मार्फत दर्ताका साथ बग फिक्स गर्नुहोस्।
* अद्यावधिक सूचना सुविधा आधुनिकीकरण।
* संकुचित प्यानल विस्तार गर्दा बग ठीक गर्नुहोस्।
* पूर्वनिर्धारित yKey मेनू छवि अँध्यारो मोडमा राम्रो काम गर्दछ। "अझै गाढा मोड टेम्प्लेट" विकल्प प्रयोग गर्न तपाईंले अवस्थित मेनुहरू सेट गर्न आवश्यक पर्दछ।
* अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् अब अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गर्न काम गर्दछ।
* नवीनतम xcode १०..10.3 को साथ कम्पाइल गरिएको
* एप्पल को पछिल्लो सुरक्षा उपकरण संग notarized
[फिक्स] एक खराब क्र्यास ठीक गर्नुहोस् जुन भर्खरको म्याकोस संस्करणहरूमा देखा पर्दछ जब वाईके प्लगइनले सन्देश प्रदर्शन गर्न प्रयास गर्दछ।
[मोड] अँध्यारो मोडमा मेनू दृश्यता सुधार। मेनू आइकन टेम्पलेट छवि को रूप मा मानिन्छ, जो डार्क मोड मा काम गर्दछ। यदि तपाईंसँग पूर्ण-र image छवि छ भने, तपाईंले yKey सम्पादकमा त्यो प्रतिमाको लागि गाढा मोड टेम्पलेट विकल्प अचयन गर्नु पर्छ।
[मोड] स्पार्कल अपडेट URL पोइन्ट प्लम अमेजिंगको साइटमा अधिक मानक स्थानमा बनाउँनुहोस्।
[फिक्स] केही हराएको अनुवाद जोडियो।
[फिक्स] गलत विन्दुमा सुरु भएको / समाप्त भएको केहि विन्डो एनिमेसन फिक्स गर्नुहोस्।
[फिक्स] क्र्याश रोक्नुहोस् जब केहि क्यालेन्डर घटनाहरू हुन्छन् (प्राय: जाग्दा क्र्यास जस्तो देखिन्छ वा क्र्यास जब केही समयको लागि खोल्दछ)।
[फिक्स] विन्डो आदेशहरू पुनःआकार गर्नुहोस् अब भर्खरको म्याकोस संस्करणहरूको लागि फेरि काम गर्दछ।
[फिक्स] केही तेर्सो स्क्रोलि bu बगहरू ठीक गर्नुहोस् र सामान्यतया विन्डो स्क्रोलि actions कार्यहरू अधिक विश्वसनीय बनाउँनुहोस्।
[फिक्स] yKey सम्पादकमा केहि छवि समस्याहरू ठीक गर्नुहोस्, विशेष गरी जहाँ केहि आइकनहरू फ्लिप गरियो।
[मोड] नयाँ नाम: iKey अब yKey हो!
[मोड] आधुनिक सुरक्षा अभ्यासहरूको साथ लाइनमा, प्रशासक प्रयोगकर्ताको रूपमा चलाउनको लागि आवश्यकता हटाइयो।
[मोड] yKey मानक विन्डो बटनहरू ह्यान्डल गर्ने तरीका सुधार गरियो (जस्तै नजिक, सानो बनाउनुहोस्, जूम / पूर्ण स्क्रिन)।
[मोड] दर्ता पछि पंजीकरण मेनू आईटमहरू सफा गर्नुहोस्।
[Mod] yKey कन्फिगरेसन अब बचत गरिएको छ र अधिक मानक प्रणाली स्थानबाट लोड गरियो। यस नयाँ संस्करण सुरू गर्दा अघिल्लो कन्फिगरेसनहरू सारिएका छन्।
[मोड] सम्पादक र yKey इन्जिन बीच साझेदारी प्राथमिकता अब राम्रो संगठित छन्।
[मोड] धेरै आन्तरिक सुधार र आधुनिकीकरण।
[मोड] एप्पलको पछिल्लो आवश्यकताहरूमा साइन इन गरीयो कोड।
[नयाँ] लगइन आइटमको रूपमा स्थापना गर्न अनुरोध अब दमन गर्न सकिन्छ यदि तपाईं चाहानुहुन्न भने
यो गर्न (तपाईं अझै पनि प्राथमिकताहरू मार्फत तपाईंको दिमाग परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ)।
[मोड] केही बासी वेब लिंकहरू हटाईयो (समय परिवर्तन हुन्छ र वेबमा परिवर्तन हुन्छ)।
[मोड] सुविधा हटाईयो "सबै प्रयोगकर्ताका लागि कन्फिगर" सुविधा। फेरि, बहुविध प्रयोगकर्ताहरू बीच कन्फिगरेसन जानकारी साझा गर्न प्रणाली खोल्नु आधुनिक सुरक्षा-सचेत विश्वमा अब स्वीकार्य अभ्यास छैन। कन्फिगरेसनहरू अझै पनि निर्यात र आयात गरेर साझा गर्न सकिन्छ, तर हामी सबै हाम्रै कन्फिगरेसनहरू निजीकृत गर्न चाहन्छौं, हैन?
[मोड] निद्रा पछि अटो-वेकको लागि हटाइएको सम्पादक समर्थन। ओएस एक्सले ओएस एक्स १०..10.5 पछि यसलाई समर्थन गरेको छैन।
[mod] iKey v1 प्राथमिकताहरू रूपान्तरण गर्नका लागि हटाइएको समर्थन पछि एक दशक भन्दा पहिले v1 प्रतिस्थापन गरिएको थियो।
[मोड] .Mac सेवा बैकअप "द्रुत पिक" को लागी हटाइएको समर्थन पछि एप्पल .Mac सेवा सेवानिवृत्त भएको छ।
[नयाँ] विकासकर्ताले हस्ताक्षर अनुप्रयोग, पुस्तकालय र फ्रेमवर्क।
[अपडेट गरिएको] कोड बेस क्लीन अप गर्नुहोस् (अपग्रेड गरिएको लेगसी कलहरू र कम लग सन्देशहरू) र प्रयोग नगरिएको / पुरानो कोड हटाइयो।
[अपडेट गरिएको] अब सुरक्षाको लागि iKey पहुँच दिन स्टार्टअपमा प्रोम्ट गर्नुहोस् -> गोपनीयता -> पहुँच तपाईंको कम्प्युटर नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन। - अधिक अद्यावधिक र नयाँ सुविधाहरू आउँदैछन्। - प्रतिक्रियाका लागि सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद।
[थप्नुहोस्] - समर्थन र कीच्यू (ergonis.com) को साथ एकीकरण
[थप्नुहोस्] - यदि कुञ्जी कुञ्जी चलिरहेको छैन भने लग प्रविष्ट गर्नुहोस्।
[फिक्स] - प्रमुख भविष्य रिलीजको लागि तयारीमा मिश्रित बगहरू।
[अपडेट गरिएको] - स्क्रिप्ट सफ्टवेयरबाट बेर साइटमा बिन फाईलको स्थान।
[फिक्स] सम्पादक हट कुञ्जी .10.5.8 correctly बिटमा चल्दा १०..64..XNUMX मा सहि देखाएन।
[फिक्स] नयाँ म्याक ओएस व्यवहारको लागि समायोजित गरियो ताकि bit२ बिट सही र स्वचालित रूपमा १०..32 र bit 10.6 बिट १०..64 को लागि काम गर्दछ र उच्चमा पनि सही रूपमा काम गर्दछ।
[मोड] बग: अन्य छोड्नुहोस् - मारिएको आईके इञ्जिन। व्यवहार परिवर्तन: नोट गर्नुहोस् iKey इन्जिन छोड्ने मात्र तरिका स्पष्ट रूपमा यसलाई छोड्नु हो। छोड्नुहोस् अन्य प्रयोगमा अन्त्य हुँदैन: यसलाई अगाडि ल्याउनुहोस् र फ्रन्ट बन्द गर्नुहोस्, वा छोड्नुहोस् iKey.ap. यदि तपाईंलाई प्लगइनमा Quit विकल्पको ट्रेसि enable सक्षम गर्न आवश्यक छ टर्मिनल प्रकारमा सक्षम गर्न: पूर्वनिर्धारितहरू com.scripttsoftware.ikey debugTracePluginEng १ टर्मिनल प्रकारमा असक्षम गर्न को लागी: पूर्वनिर्धारित com.scripttsoftware.ikey डिबगट्रेसप्लगइन ई 1 ० लेख्नुहोस्।
[मोड] नयाँ XKey (बहु कुञ्जीहरू, आनन्द स्टिकहरू, जोग र शटल) को एक विशेष USB उपकरणको विस्तारित समर्थनको लागि USB ट्र्यासि Added थपियो। नयाँ xkey को प्रयोगकर्ताहरूको विवरण र जसलाई यो आवश्यक छ: आदेश रेखा सक्षम पार्न प्रविष्ट गर्नुहोस्: पूर्वनिर्धारित com.scripttsoftware.ikeyeditor डिबगट्रेस युएसबी १ लेख्नुहोस् त्यसपछि समर्थन गर्न iKey सम्पादक लगहरू पठाउनुहोस्।
[फिक्स] भर्खरका अनुप्रयोगहरू र कागजातहरू काम गर्दछ
[मोड] बहु मोनिटरहरूको साथ काम गर्दछ। विन्डोजहरूलाई नकारात्मक स्थानमा सार्न सक्छ। बाँया मोनिटर नकारात्मक मानिन्छ।
[मोड] स्थापना अब स्थापना को अन्तमा म्यानुअल खुल्दैन।
[फिक्स] संस्करण २.2.4.3.। नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि खुल्दैन। यो नयाँ prefs मुद्दा स्थिर।
[मोड] सम्पादक मद्दत मेनू परिवर्तन: iKey वेबसाइट ...
[मोड] लग सन्देश हटाईयो: यसले रनआइजेसनहरू पुन: शुरू गर्दछ सफलता: ० असफल: x
[फिक्स] विफल पंजीकरण कुञ्जीहरूका लागि स्थिर हिज्जे र सुधार गरिएको प्रतिक्रिया।
[mod] स्थापना गर्नुहोस् अब तपाईंलाई अनुकूलन स्थान चयन गर्न अनुमति दिँदछ।
[Mod] सेटअप म्यानुअल स्थिर र चर चौडाई प्रदर्शन अनुमति दिन
[थप्नुहोस्] पुरानो स्क्रिप्ट्सटवेयरबाट नयाँ वेबसाइटमा सारियो, नयाँ डोमेनमा नयाँ नाम> प्लम अद्भुत
[मोड] सुरक्षा कारणका लागि संपादकको फाइल मेनूबाट प्राधिकृत विकल्प हटाइयो। नोट: यसले Wake from Sight विकल्पलाई मात्र प्रभाव पार्छ यदि तपाईं पहुँच योग्य उपकरण समर्थन सक्षम गर्नुहुन्छ भने। कुनै वेक विकल्पको साथ स्लीप कमाण्ड अझै कार्य गर्दछ।
[मोड] प्रणाली कमान्ड - १०. in मा bit 64 बिटमा अक्षम पारिएको क्लासिक अब सुरू गर्नुहोस्
[mod] pref बचत गरेन यदि तपाईंले रातो बन्द बटन थिच्नुभयो भने - यसलाई असक्षम गर्नुहोस्
[मोड] स्वागत स्क्रिनको iKey.app मा पीडीएफमा लिंक छ पीडीएफ अपडेट र हटाउन आवश्यक छ
[मोड] ईमेल प्रतिक्रियाले अब रिपोर्ट गर्दछ "म म्याके ओएस एक्स १०..2.4.0.२ (इंटेल) 10.6.2) अन्तर्गत iKey २.64.० चलाउँदैछु।"
[मोड] लगइन कार्य सम्पादनका लागि एक्शन सम्पादक फ्रेमवर्क "IKActionDebug" को लागी प्रयोगकर्ता डिफल्ट थपियो।
[फिक्स] 'कर्सर' नाम गरेको छवि फेला पार्न सकेन।
[थप्नुहोस्] वस्तु सी २.० द्रुत गणनाको चीजहरूको गति बढाउन प्रयोग गरियो
[थप्नुहोस्] फोल्डर कमाण्डमा खुला फोल्डर विकल्पहरू थपियो ..
[add] नयाँ Ikey पूर्वनिर्धारित मेनू
[फिक्स] फोल्डर heirarchy लक गर्ने तय।
[फिक्स] फिक्स गर्नुहोस्: आईके एडिटर कन्सोल *** चेतावनी: विधि सेटड्राउज ग्रिड: क्लास स्ट्राइप्टेबलभ्यूलाई अस्वीकार गरिएको छ। यो भविष्यको रिलीजमा हटाइनेछ र अब उप्रान्त प्रयोग गरिनु हुँदैन।
[फिक्स] फिक्स्ड: १०..10.6.x मा स्थानहरू छनौट गर्नका लागि नेटवर्क कमाण्ड
[मोड] मुद्दा सफा गर्न माउन्ट सर्भर अद्यावधिक गरियो, अब इंटर्नेसन समर्थनको लागि UTF8 प्रयोग गर्दछ।
[मोड] टर्मिनल र सम्पादन मा रन को लागी यूनिक्स अपडेट उपकरण उपकरण।
[मोड] युनिक्स कमान्डले अब "यूनिक्स आदेश रिटर्न त्रुटि #" फर्काउँछ यदि त्रुटि ocurrs।
[थप्नुहोस्] मेनूमा थपिएका टिप्स टिप्स यदि मात्र आइकन प्रदर्शित गरियो।
[फिक्स] स्थिर ध्वनि माथि, तल र म्यूट गर्नुहोस्। कुञ्जीपाटी प्रकारको परवाह नगरिकन अब कार्य गर्दछ।
[थप्नुहोस्] ध्वनि-> अधिकतम भोल्युम आदेश। अधिकतम मानमा भोल्युम सेट गर्नुहोस्।
[मोड] युनिक्स - फाइल चलाउनुहोस् - सम्पादनले कुन सम्पादकलाई बताउँदैन
[मोड] मेनूमा छवि / शीर्षक हटाउने वा थप्न फिक्स गरियो।
[फिक्स] फिक्स बग मेनुमा दोस्रो समान कार्य हो वा प्यालेटले थप गर्दैन।
[मोड] लग सन्देश हटाईयो: रनअक्शनहरू: पुन: सफल सफलता: ० असफल:।
[थप्नुहोस्] पूर्ण रूपमा bit 64 बिट सबै मोड्युलहरू सहित १०..10.6 प्रयोग गर्दा। यसको मतलब यो छिटो चल्नेछ र कम मेमोरी प्रयोग गर्दछ।
[Mod] हटाइएको कोड हटाइयो।
[थप्नुहोस्] सजिलैसँग iCock नियन्त्रण गर्न नयाँ मोड्युल।
[Mod] भर्खरको कागजात र भर्खरको परिवर्तनहरू यस संस्करणको लागि बन्द गरियो (देखाउने तर अक्षम)
[Mod] यो र भविष्यका संस्करणहरूले १०..10.5 र १०..10.6 लाई समर्थन गर्दछ तर १०..10.4 छैन
अनलाइन पुस्तिकाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
म्यानुअल को पूर्ण पीडीएफ को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
२.2.8.0.० म्याक ओएस १०.10.9 - १०.१10.15
२.2.7.0.० म्याक ओएस १०.10.7 - १०.१10.14
२.२.२ आवश्यक छ> म्याक ओएस १०..2.5.2 र <म्याक ओएस १०.००
२.2.3.4.। - <म्याक ओएस १०..10.5 आवश्यक छ
yKey ००: ०:: at मा उल्लेख गरिएको छ म्याकबसेर्भरमा डेव ह्यामिल्टनको साथ यो महान पोडकास्टमा।
धेरै विकल्पहरूको साथ महान अनुप्रयोग। स्थिर पनि। केहि वर्ष पहिले क्विककीज छोडे पछि म यससँग साँच्चिकै खुशी छु। - MacUpdate मा बेज
म फिनाले धेरै धेरै कार्य गर्दछु, धेरै शक्तिशाली तर जटिल प्रोग्राम टाइपसेटिंग र पाना संगीत सिर्जना गर्नका लागि। यदि तपाईं कुञ्जीपाटी खेलाडी हुनुहुन्छ - जुन म होईन - तपाईं मिडी कीबोर्डको साथ स्कोरमा नोटहरू खेल्न सक्नुहुनेछ। तर हामी मध्ये बाँकिहरूले या त प्यालेट वा कम्प्युटर किबोर्डबाट म्यानुअल रूपमा नोटहरू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। अब यदि तपाई वास्तविक नोटका साथ तारहरू प्रविष्ट गर्दै हुनुहुन्छ - केवल तार प्रतीकको विपरीत - यो एक धेरै थकाउने प्रक्रिया हो जसलाई मल्टिपल किस्ट्रोकहरू आवश्यक पर्दछ। तर yKey संग यो एक हावा हो। तपाईं भर्खर आफ्नो म्याक्रो बनाउनुहोस्, ट्रिगर थिच्नुहोस्, र नोटहरू जादू द्वारा को रूपमा देखा पर्ने हेर्नुहोस्! yKey ले मेरो अन्तिम उत्पादकता धेरै बढाएको छ। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, र यस विन्दुमा, म आश्चर्यचकित हुन्छु कि मैले कहिले पनि यो बिना नै कसरी सहयोगी व्यवहार गरें। - मकअपडेटमा W-Pyper
मैले कुञ्जीपाटी मास्ट्रो, स्पार्क र क्विककीहरू कोसिस गरें तर उनीहरूमध्ये कुनैले पनि मैले चाहेको हिसाबले गरेको छैन। iKey गर्छ। - कलरग्राविटी
म iKey वर्षौं को लागी प्रयोग गरिरहेको छु, राम्रो नयाँ UI भन्दा पहिले नै। मैले यसलाई बग मुक्त र स्थिर हुनको लागि लगातार फेला पारेको छु। एक पटक तपाईले UI को वरपर तपाईको दिमाग प्राप्त गर्नुभयो, सर्टकट सेटअप गर्न वास्तविक प्रक्रिया जटिल छैन। यसको विपरित, मैले यो एकदम सहज पाएको छु। - सिमीचेवल
धेरै सहयोगी कार्यक्रम। - मकअपडेटमा कोलेट